Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Fizahan-tany any Italia mitsiky noho ny Campania Teatro 2021
Amin'ny volana septambra, toerana ho an'ny sehatry ny dihy sy sehatra iraisam-pirenena no hatao ao amin'ny Campania Teatro miaraka amin'ny fampisehoana tarihin'ny Tale Arzantina, Marina Otero; Greek Choreographer, Dimitris Papaioannou; ary ny Tale Soisa, Christoph Marthaler.
Amin'ity taona ity dia ny andiany faha efatra ambin'ny folo an'ny Campania Teatro izay tanterahina ny 12 Jona ka hatramin'ny 11 Jolay.
Hetsika 160 mahery no haseho mandritra ny iray volana fandaharana amin'ny toerana ivelany sy amin'ny fiarovana azo antoka.
Ny olom-pirenen'i Italia sy ny mpizahatany dia hanana fotoana handray anjara amin'ity festival mahafinaritra ity izay natao manerana ny faritra Campania.
Teny filamatra mitovy, festival vaovao
Na dia mitovy aza ny teny filamatra, teraka indray ny teatra, satria afaka herintaona, ny tena fahaterahana indray amin'ny sehatry ny teatra dia mbola an'ny sokajin'ny fanambarana sy fikasana tsara. Ny festival 2021 vaovao dia ny fahadimy notarihin'i Ruggero Cappuccio ary hidina amin'ny tantara satria izy no lasa ilay Festival Napoli Teatro lasa Campania Teatro Festival.
Ity dia fomba iray hiandrasana ny hoavin'ny hetsika izay manomboka amin'ny 2022 dia hanitatra hatrany ny hetsika ara-kolontsaina avy any Naples ka hatrany amin'ny faritr'i Campania manontolo, ka mahatonga ny fifandraisana sy ny firaisan-kina eo amin'ny tontolo sy ny fananana ara-drafitra. Ity koa dia hamaritra tsara kokoa ny fanoloran-tena mivaingana ny faritra Campania hanohana ny fanadihadihana marolafy an-dasy nokarakarain'ny Campania Foundation of Festivals izay tarihin'i Alessandro Barbano, izay mahay manambatra ny kolontsaina nasionaly sy iraisam-pirenena amin'ny hatsaran'ny sasany amin'ireo mampihetsi-po indrindra sy toerana an'ohatra ao amin'ny faritra Campania.
Ny faritra dia manome harena izay nohatsaraina sy nampitaina tsy amin'ny alàlan'ny fandraisana anjaran'ireo zava-misy manan-danja maro amin'ny sehatra teatra italianina sy ivelany ihany, fa koa amin'ny fijerena ny talenta sy ny maha-matihanina ny famokarana sy orinasa maro izay niasa nandritra ny taona maro tany Campania, miaraka amin'ny fanoloran-tena fa amin'ny lafiny sasany dia kanto sy sosialy.
Mpiasa an-tsehatra maherin'ny 1500 no ho isan'ny faritra Campania Teatro Festival 2021. Ity dia marika mivaingana iray hafa amin'ny fanohanana tsy ara-dalàna an'ireo izay manohy miaritra ny vokatra ara-toekarena henjana amin'ny sehatra iray izay sahirana mafy tamin'izany fotoana izany noho ny areti-mandringana. Izany rehetra izany dia miaraka amin'ny fanantenana fa hanao ny anjarany ny Fanjakana Italiana, toy ny nitranga tany amin'ireo firenena eropeana hafa, ny fanekena ny zony izay mbola nolavina ankehitriny.